प्रतिगामी ओलि , गद्दार नेपाल र एमाले - JanataPatra
२० श्रावण २०७८, बुधबार ०७:१२ August 4, 2021 Janatapatra
एमाले भित्र आरोप प्रत्यारोपको श्रृखला जारी छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध प्रतिगमनको मतिहारको रुपमा आरोप लगाइएको छ । त्येसै गरी पार्टीका वरिष्ट नेता माधव नेपाललाई गद्धार र देशद्रोहीको आरोप लगाइएको छ । एमालेका कार्यकर्ता यतिवेला सम्म दुईधारमा वाँडिएका छन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई हदै सम्म तल झरेर आरोप लगाउने श्रृखला चलिरहेको छ ।
हिजो पार्टीवाट निस्कृय रहेकाहरु समेत यतिवेला गुटगत राजनीतिमा सकृय रहेको देखिएका छन । एकाथरी पदिय लालसामा गुटको भजन गाईरहेको र अर्को थरी आफुलाईनै महाशक्ती ठानेर गजक्क परिरहेका छन । पार्टी भित्र फरक मत राख्नेलाई वर्गदुश्मनको रुपमा हेरिरहेको अवस्था छ । तर केहीलाई भने पार्टी रहे पद प्रतिष्ठा रहन्छ । पार्टी एकता भए सवैलाई लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने थरिका पनि छन । यी ३ थरिका प्रवृतिको घेरा भित्र एमाले छ ।
पार्टी चलाउने भन्दै गुट चलाउने नेतृत्व र त्यसको साक्षी वसेका कार्यकर्ता पंक्ती र वाहिरी आक्रमणको सिकारमा परिरहेको एमाले वहुदलिय जनवादको मन्त्र भजिरहेको छ । नेतृत्वमा देखिएको वच्चपन र कार्यकर्तामा देखिएको कुण्ठाले एमाले जिवित रहनत सक्छ ।
एकाथरी माधव नेपाल विनाको एमाले वनाउन लागीरहेका छन । अर्को थरी केपी ओली विनाको एमाले वनाउन लागीरहेका छन । के यसरी एमाले एकता सम्भव छ ? आखाँमा लागेको गुटको पर्दा हटाएर अलि पर गएर हेर्ने हो भने के एक पक्षको मात्र गल्ती देखिन्छ ?
विग्रन धेरै समय लाग्दैन र सप्रिन समय लाग्छ । अव सप्रिने वाटोमा हिड्न त्याग, तपस्या र मेलमिलापको वाटो हिड्न जरुरी छ । अरुको आलोचना गरेर भन्दानी सकरात्मक पक्षलाई प्रोत्सान दिएर संवादको संकृति विकास गर्न जरुरी छ । एक हुदाँ म कहाँ हुन्छु भन्दानी हामी कहाँ हुन्छौं भन्ने भावना जागृत हुन जरुरी छ ।
पछिल्लो समय १० वुदें लगायत केही सकरात्मक कुराहरु अघि वढेको छ । दुवै पक्षका नेताहरु छलफलमा छन । सायद सहमत होला । किन की एमाले हाँडि होईन रहेछ । कसौडी हो कुच्चीन्छ तर फुटीहाल्दैन ।
यसको लागी भावनात्मक सम्वन्धको जरुरी छ । व्याक्ति प्रदान भन्दानी विचार र पद्धिती प्रदान भनेर सोचिनु पर्दछ । गल्ती दुवै पक्षवाट भए होलान वसेर समिक्षा गर्न पर्दछ । वर्तमान अवस्थाका कुनै पार्टी फुटेर पनि मुलुकलाई फाईदा छैन । क्षणिक रुपमा कोही व्याक्तीलाई फाईदा होला तर दिर्घकालिन रुपमा वेफाइदा नै छ । आम कार्यकर्ताले पनि एकताको विकल्प देखेका छैेनन् । त्यसो हुदाँ नेतृत्वले निक्कै सोच्न जरुरी छ ।